Ajụjụ | Ningbo Chayo Automotive Products Co., Ltd.
AJ QJ F NDRE A NA-AJREKARRE
Ọnụahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ dị n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta emelitere emelitere mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwe nke kacha nta na-aga n’ihu. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ iregharị mana ọ pere mpe pere mpe, anyị na-akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị nwetara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere ihu ọma ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
Nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ ụlọ akụ anyị, Western Union ma ọ bụ PayPal:
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu. Anyị na-ejikwa ngwongwo ihe ọghọm pụrụ iche maka ngwongwo dị egwu yana ndị na-ebugharị nchekwa nchekwa bara uru maka ihe ndị na-ekpo ọkụ. Ngwunye ọkachamara na ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike ịnweta ụgwọ ọzọ.
Kedu ihe onye na-ehicha agụụ agaghị eme?
Otu esi ehicha ma debe ihe nhicha nhicha
Ndị Bịara Ọhụrụ